Madbacadda Affinity waxaad ku beddeli kartaa Sawirka iyo Naqshadeynta adigoo hal guji | Abuurista khadka tooska ah
Daabacaha Affinity wuxuu calaamadin karaa kahor iyo kadib naqshadeeyayaasha
Daabacaadda Affinity Publisher ayaa la bilaabay iyo munaasabadda tooska ah Serif wuxuu daaha ka rogay muuqaal cusub: dhammaan isticmaaleyaashu waxay awoodi doonaan inay kala beddelaan naqshadeeyaha, Sawirka iyo Daabacaha si ay si toos ah ugu helaan dhammaan buug-yaraha dhammaan aaladaha ku jira barnaamij kasta.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida ay u shaqeyn doonto, hore u imow si aad ula kulanto caqliga gadaal ogeysiiskan oo hubaal keeni doona dabada; Ma ahan wax aan caadi ahayn in Adobe uu raaco ku-cusbooneysiin cusub.
Serif wuxuu bilaabay barnaamijkiisa Affinity Publisher dalab gaar ah 20% markaa waxaad ka dhigi kartaa .43,99 54,99 it goorta ay noqon doonto .XNUMX XNUMX marka ay dalabku idlaado.
Waxyaabaha muhiimka ah ee xiisaha leh ee ku saabsan bilaabista ayaa ah muujinta haddii aad leedahay mid ka mid ah barnaamijyada kale ee Serif, sida Sawirka Affinity ama Naqshadeeyaha Affinity (kuwaas oo helay cusbooneysiin weyn dhawaan), waad furi kartaa tiknoolajiyadda Studio Link Publisher.
Marka aad gujiso inta u dhexeysa mid ka mid ah saddex icons oo kala duwan oo aad ku arki doonto xagga sare Laga soo bilaabo interface-ka, waxaad ka heli kartaa liiska buuxa ee vector iyo qalabka tifaftirka sawir-qaadaha ee Affinity Publisher.
Taasi waa, markii ugu horreysay ee barnaamijyada naqshadeynta, naqshadeeye waad u wareegi kartaa inta u dhexeysa tafatirka iyo daabacaadda isla barnaamijkaas. Waxay u egtahay inaad ka tagi karto Adobe Photoshop ilaa Illustrator adigoo gujinaya hal guji oo markaa uga gudub hal howlood mid kale hadba baahidaada iyo xawaaraha dhan ee ay la micno tahay.
Maxaa naga yaabiya haddii istiraatiijiyaddan loo maleyn karo inay soo jiidato naqshadeeyayaal badan in ay u arkaan Suugaanta Affinity-ka ee barnaamijyada jawaabta ay sugayeen muddada dheer; Gaar ahaan sababtoo ah hal lacag bixin waxaad haysataa saddex beddel oo wax ku ool ah marka la barbar dhigo kan Adobe.
Waan arki doonaa haddii Adobe uu awood u yeelan doono inuu si deg deg ah uga jawaabo barnaamijyo taxane ah oo suuragal ah inuu calaamadeeyo kahor iyo kadib sifiican iyo socodsiinta shaqo ee joogtada ah ee udhaxeysa daabacaada Affinity, Sawir iyo Naqshadeeye.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Daabacaha Affinity wuxuu calaamadin karaa kahor iyo kadib naqshadeeyayaasha
Daabacaadda Affinity ee ereyada 300: waxay leedahay wax kasta oo aad ugu baahan tahay qaabeynta tifaftirka
Wacom waxay ku dhawaaqeysaa Bamboo Ink Plus sidaa darteed waxaad ku hilmaami kartaa baytariyada